Android နှင့် iPhone ကိုအကြားဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ရန်ကဘယ်လို
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » Make ဗီဒီယိုကို Android နှင့် iPhone အကြားတောင်းဆို | ဤတွင်အားလုံးသတင်းအချက်အလက်
Make ဗီဒီယိုကို Android နှင့် iPhone အကြားတောင်းဆို | ဤတွင် APK ကိုအားလုံးသတင်းအချက်အလက်
iPhone နဲ့ Android အတွက်အကြားကဗီဒီယိုချက်တင်လုပ်ဖို့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ တခြားပလက်ဖောင်းပေါ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ကို Apple ကစတင်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကဗီဒီယို chatting app ကိုရှိခဲ့လျှင်၎င်းသည်အလွန်ကြီးစွာသောကြပြီ။ ကံကောင်းတာကဆိုလိုက်ဖက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များသို့မဟုတ်ပဋိပက္ခများမရှိဘဲ iPhone နှင့် Android ကြားကဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများအတွက်ရရှိနိုင်အခြားနည်းလမ်းများများရှိပါတယ်။ Microsoft ကကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Google ကလုပ် app ကိုနဲ့ app ကိုအသုံးပြုခြင်းပလက်ဖောင်းတစ်လျှောက်တွင်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှအမြန်ဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Apple ကအများအပြားပလက်ဖောင်း apps များ chatting အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုကိုထောက်ပံ့မပေးစျေးကွက်အတွက်သာဦးဆောင်ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျမျိုးစုံပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်သောဤ app များထဲကတစ်ခုစတင်သုံးစွဲတစ်ချိန်က, သင်ပင်နောက်တဖန် FaceTime ကိုသုံးပါရန်ရှိသည်မည်မဟုတ်, ငါ့ကိုခိုလှုံပါ၏။
ကျနော်တို့ iPhone နှင့် Android မှာအကြားကဗီဒီယိုချက်တင်လုပ်ဖို့လူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကို apps များအချို့စာရင်းပြုစုဖို့အကြောင်းရှိပါသည်။ ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့ကဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှလှည်နည်းလမ်းများဆွေးနွေးသွားကြသည်မဟုတ်။ သင်ရုံ iOS နှင့် Android များအတွက်အောက်ပါဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကို app များကိုမဆို install လုပ်ရန်ရှိသည်, သင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအားလုံးကိုအစုံရှိပါတယ်။ သင်အမှန်တကယ်နောက်ထပ် tools တွေကိုသုံးစွဲဖို့မလိုပါ။ ယခုငါတို့ Android နှင့် iPhone များအကြားကဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖို့ဘယ်လိုဆှေးနှေးခဲ့ကြပြီ, ရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအဲဒီ apps များဆွေးနွေးရန်ကြကုန်အံ့။
ဤတွင်ကို Android နှင့် iPhone betwenn ကိုဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖို့ apps များဖြစ်ကြသည်
Google က Duo
Google ကလွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတွင်အချို့အေးမြ apps များအောင်အတွက်စေ့စပ်ထားပြီးနှင့် Google Duo မျှချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကို iPhone နှင့် Android ကိုဖြတ်ပြီးကဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုအလိုလိုသိနှင့်အလင်း app ကိုရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, Google က Duo အဲဒီမှာကိုအကောင်းဆုံး apps များထွက်ကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာကောင်းစွာထိပ်တန်းအရည်အသွေးဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအဖြစ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တည်ငြိမ်အတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်းရန်လူသိများသည်။ ဒါဟာလူအတော်များများကအသုံးပြုခဲ့ပြီး, ထိုသို့အလွန်နိမ့်ခေါ်ဆိုမှုကိုတစ်စက်မှုနှုန်းရှိပါတယ်။ သင်သည်သင်၏အလုပ်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝအဘို့တောင်းဆိုရညျအသှေးကိုဗီဒီယိုအပေါ်အားကိုးလျှင် Google မှ Duo သငျသညျနှိမ့်ချကြကုန်အံ့ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
ဒီ app ကို iOS နှင့် Android နှစ်မျိုးလုံးအတှကျအရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကွောငျ့, နှစ်ဦးစလုံးသည်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် install လုပ်ပါစိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်လည်းမရှိ။ သင်ပင်ခေါ်ဆိုမှုတက်ကောက်နေရှေ့တော်၌ထိုခေါ်ဆိုသူ၏မြင်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာဒီမှာအကောင်းဆုံး features တွေကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျကိုဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှမကြိုက်ဘူးလျှင်ဒီ app နှင့်အတူ, သငျသညျမြားကိုလညျးအသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏မိုဘိုင်းဒေတာသိမ်းဆည်းဖို့ချင်ပေမယ့်နေဆဲမဆိုပြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲအလွန်ကြီးစွာသောချက်တင်အတွေ့အကြုံရှိသည်ချင်တယ်ဆိုရင်, ဒီ app ကိုသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့တခါတရံချိတ်ဆက်ဖို့နည်းနည်းပိုရှည်ကြာပါသည်။ သငျသညျစောငျ့ဖို့အချိန်မရှိဘူးလျှင်တခါတရံနှောင့်အယှက်ခံစားရပါတယ်။
ဒါဟာကျိန်းသေအများအပြားပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီး app ကိုခေါ်ဆိုထိပ်အရည်အသွေးဗီဒီယိုဖြစ်ပါသည်။ ရုပ်ပုံများနှင့်အသံနှင့်ဗီဒီယိုကချတ်အောင်ထံမှစာသားများပေးပို့ခြင်း မှစ. , Skype ကိုအားလုံးရှုထောင့်အပေါ်အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောပလက်ဖောင်းပေါ်ဒီ app ကိုရနိုင်သည်။ Skype ကို သင်နှင့်အတူသွားရမည် app ကိုကျိန်းသေပါပဲ။ ဒါဟာ iPhone နှင့် Windows PC မှာအကြားတစ်ဦးကိုဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။ Skype ကို Windows, Mac, Android နဲ့ Windows Phone နှင့် iOS အပေါ်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
သင်အလွယ်တကူလုံးဝနီးပါးမဆိုပလက်ဖောင်းမှချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ app တစ်ခုရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, Skype ကိုသင်လိုအပ်တစ်ခုခုပါပဲ။ Skype ကိုသုံးခြင်းဖြင့်သင်သည်အမျိုးမျိုးသောချက်တင်အုပ်စုများ၌သင်တို့၏မိသားစုဝင်များနှင့်မိတ်ဆွေများကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းမည်သည့်ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲအတော်ကြာလူတို့နှင့်အတူစကားစမြည်စတင်နိုင်ပါသည်။ Skype ကိုအကြီးအဗီဒီယို chatting အတွေ့အကြုံကိုပူဇော်ဖို့နည်းနည်းပိုပြီးဒေတာကြာပါတယ်။ ဒါဟာထိပ်တန်းအဆင့်အတန်းဗွီဒီယိုအရည်အသွေးကယ်တင်တတ်၏, ထိုသို့တည်ငြိမ်သောကွန်နက်ရှင်နဲ့ချောချောမွေ့မွေ့အတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းသည်။ သို့သော် Skype ကိုထက်ပိုမို4နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော devices တွေကို support မပေးပါဘူး။
BlackBerry ကိုယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်လည်းလူသိများသည်ဖြစ်သောဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ BlackBerry ကို Messenger ကို (BBM) BlackBerry ကိုကနေတရားဝင် messaging app တစ်ခုဖြစ်ပြီးကိုလည်းလုံခြုံအောင်ကိုဗီဒီယို chatting app များကိုတစ်ဦးအဖြစ်လူသိများသည်။ ဒီ app နှင့်အတူ, သငျသညျအခမဲ့အဆက်အသွယ်အကြားလက်ပတ်နာရီနှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစတစ်ခုစာပုံးရှိပါတယ်, သင်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတစျခု-on-one ချတ်နှင့်အုပ်စုချတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဖိုင်များဓါတ်ပုံများနှင့်အသံဖြင့်မှတ်စုများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုထံမှပေးပို့သည့်အနေဖြင့်, BBM ကို iOS နှင့် Android နှစ်မျိုးလုံးအတွက်အလွန်နိုင်စွမ်း App ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနိုင်ရန်အတွက်, သင်ရုံအဆက်အသွယ်ရယူမျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်ခြမ်းမှာဗီဒီယိုချက်တင်အိုင်ကွန်တွန်းဖို့ရှိသည်။ ဒါဟာအကြီးအဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုကယ်တင်တတ်၏, သင်ကမဆိုထစ်သို့မဟုတ် frame ကိုပေါက်မမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအိမျမှာနေတဲ့ကြီးမြတ်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသော်လည်း, သင်ကဗီဒီယို chatting apps များအပေါ်အလွန်ဘုံဖြစ်ကြောင်းဆိုဆက်ကြောင်းကိုမြင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကဖုန်းခေါ်အောင်မှကြွလာသောအခါအဆိုပါ app ကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကချတ်အပေါ်မည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိပါ။
သင်ရုံအလွန်ရိုးရှင်းပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်နှင့် iOS နှင့် Android မှာနှစ်ဦးစလုံးအဘို့ဖြစ်၏ထားတဲ့ app ကိုတောင်းဆိုတဲ့ဗီဒီယို, လိုလျှင်, IMO သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာအကြားဖြစ်ပါသည်။ ဒီ app ထဲမှာ, သင်သည်အရည်အသွေးမြင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့် iPhone နှင့် Android ကြားကအဆုံးမှအဆုံးသို့ encryption ကိုခံစားနိုင်။ IMO app ကို chatting အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်လုံခြုံဗီဒီယိုဖြစ်ပါသည်။ ဒီ app မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူအုပ်စုတစ်စုကဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှသင့်လျော်သည်။ ဒါဟာအကောင်းဆုံး features တွေကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဒါဟာအကြီးအစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးရှိခြင်းနှင့်ပျော်စရာရှိခြင်းများအတွက်ဗီဒီယိုချတ်ထဲမှာတော်တော်များများလူတွေရှိသည်ဖို့တကယ်ကြီးလှ၏။ ဒါ့အပြင် app ကိုအလွန်နိမ့်ခေါ်ဆိုမှုကိုတစ်စက်မှုနှုန်းရှိပြီးသင်အလွယ်တကူဒီ app ကို အသုံးပြု. လူများစွာနှင့်အတူ chat လို့ရပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, IMO app ကို 4G LTE ကိုနှင့်ဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုအစဉ်အမြဲသင့်ခေါ်ဆိုမှုကျော်သာလွန်ဖြစ်နေဆဲသင့်ရဲ့အပေါ်ကိုတကယ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ICQ က iPhone နဲ့ Android တို့အကြားကဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရန်နောက်ထပ်အေးမြ App ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် aswesom app ကိုရညျအသှေးကိုဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှ features တွေတန်ချိန်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစ, သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေတစ်ရဲ့ device ကိုမှသင့်ရဲ့ device မှ data အားလုံးကိုလွှဲပြောင်းနိုင်, အများကြီး-လုံခြုံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ ICQ app ကို ထို့အပြင်အသံဖြင့်မက်ဆေ့ခ်ျအဘို့အမိန့်ခွန်းကိုလွှဲပြောင်းနှင့်ကအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုပေးသည်နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းသင်၏ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများဖန်တီးချတ်မှာသူတို့ကိုသုံးနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်, ဤနေရာတွင်သင်က Android နှင့် iPhone များအကြားကဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်သမျှရဲ့။ ဒါဟာသင်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများအတွက် Android နဲ့ iOS ကိုနှစ်ဦးစလုံးကိရိယာများပေါ်တွင် app တစ်ခု install လုပ်ရန်ရှိသည်ဟုမပါဘဲဝင်နှင့်အဘယ်သူမျှမကြီးတွေသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကအားလုံးကိုပလက်ဖောင်းကမ်းလှမ်းခဲ့သည်မဟုတ်ပါအဖြစ်ကို iOS ပေါ်မှာ FaceTime အပေါ်မူတည်မှမရှိကြပါဘူး။
ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု ဗီဒီယိုကဟာ android များအတွက် apps များခေါ်ဆို Android နှင့် iPhone ကိုအကြားကဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ